Ny fifandraisan'i Grand P - Eudoxie Yao, ity no antony tsy niasa - teles relay
Eudoxie Yao sy Grand P dia nanao ny fikorontanana tao amin'ny tambajotra sosialy rehefa avy nanambara tamim-pahitana fa miaraka izy ireo ary tsy lavitra ny fampiraisana ny fatoran'ny fanambadiana. Saingy mampahafantatra antsika i Eudo fa tsy hisy fanambadiana intsony satria miaina fifandraisana mahafinaritra amin'ny hafa.
Nifandray tsara i Eudoxie Yao sy i Grand P. Tamin'ny Aprily 2020, nanamafy izany i Eudo amin'ny tambajotra sosialy: "Nolazain'i Dadabe fa te hanambady ahy izy." Noraisiko izany dia ho hitantsika aorian'izay ny fanagadrana azy. Manana fo lehibe i Grand P ary tena tia azy aho. Vehivavy aho ary tokony handeha amin'ny lalako. ” Nandray ity vaovao ity ireo mpiserasera amin'ny Internet ho toy ny dokambarotra.
Saingy, toa ny mpampiasa Internet no nahazo izany. Volana vitsivitsy taty aoriana, ny fanovana ho amin'ny endrika malala-tanana dia nanova tanteraka ny fanapahan-kevitra. Miaiky izany izy "Tsy matotra i Grand P ... Somary nisalasala izy". Raha ny filazany dia tsy mpihinan-tena ilay mpihira Gineana.
Ary ilay kintana tanora Ivoariana, tian-dehilahy maro fa tsy hanambady an'i Grand P. Na dia faly manambady azy aza izy ireo dia tsy ho afaka handalo eo anatrehan'ny ben'ny tanàna intsony. Eudoxie Yao no nahita tsara kokoa noho ny kintana gineana. Na izany na tsy izany dia izany no nampahafantarany azy nandritra ny programa Peopl'Emik, navoaka tamin'ny La 3.
"Tsy matotra i Grand P ... Somary nisafoaka izy"hoy ilay tovovavy teo amin'ny fahitalavitra. Midika izany fa lany tanteraka ny fiatoana. Ilay pejy Pejy Grand P dia tena mihodina ary "Eudo" nandeha tamin'ny toko iray hafa tamin'ny fiainany izy. Na dia tsy nanambara ny mombamomba ny olon-tiany ny Kim Kardashian avy any Afrika, dia mbola nanambara ihany izy fa milomano am-pifaliana niaraka tamin'ny iray hafa ary tany ivelan'ny Côte d 'Ivory.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/relation-eudoxie-yao-grand-p-voici-pourquoi-ca-na-pas-fonctionne/
Ny Great P - Fifandraisana Eudoxie Yaoeto ny antony tsy nahomby
Farany, ny antony nisarahan'i Brad Pitt sy i Angelina Jolie dia nambara